10 Cunto Shiineys ah oo bilaw ah oo sahlan
Macmalka Shiineeyska Shiinaha
01 ee 11
Cunista Shiineeyska Shiinuhu waa mid aad u fudud
Sawirada by Daniel Frauchiger, Switzerland / Getty Images
Raashin badan oo Shiineeys ah ayaa ah mid deg deg ah oo sahlan. Qaarkood waxaa lagu samayn karaa maaddooyinka laga heli karo dukaamada intooda badan, halka kuwo kale ay u baahan karaan safar suuqa Suuqa ama bedel degdeg ah. Qaybta ugu wanaagsani waa in ay yihiin kuwo aad u kala duwan sidaa darteed haddii aanad haysan wax maaddo ah, uma baahnid inaad ka walwasho.
Maxay sahlan tahay in la kariyo? Qaar ka mid ah, sida walaaq-baradhada, waxay qaadaan daqiiqado kaliya si ay u sameeyaan. Qaar kale, sida maraqa iyo maraqa, waxay qaataan waqti dheer laakiin wali waxay ka kooban yihiin tallaabooyin yar oo fudud. Tani waxay kaa saari kartaa wakhti badan oo bilaash ah inta cuntadu socoto.
Haddii aad ku cusub tahay cunto karis Shiineeys ah ama kaliya raadinaya qashin aan u baahnayn waqti aad u badan jikada, waxaad ka heli doontaa raashinkaas asaasiga ah.
02 ee 11
Ku billow Bariiska Dheeriga ah
Mid ka mid ah cuntooyinka ugu horeeya qof kasta oo xiiseynaya cunnada shiineeyska ah waa inuu bartaa waa bariis la shiilay . Waa saldhigga cuntooyinka badan oo ku siin doona inaad la kulanto wiishka ama si dhakhso ah wax loo kariyo ee digsiga kudheer.
Bariis barafku waa mid aad u fudud waxayna qaadataa dhowr daqiiqo marka aad karisid bariis. Cuntadani waxay u baahan tahay basasha cagaaran, ukunta, milix iyo basbaas, iyo suugo ama suugo qoyan. Waxaad ku dari kartaa hilibka iyo khudradaha kale haddii aad jeceshahay oo aad u rogto saxan dhinaca cuntada ah cunto fudud.
Dhiig karkar ah oo fudud oo fudud
Markaad sahamiso cuntooyinka Shiineeyska ah, waxaad ogaan doontaa in suugaanta loo yaqaan 'oyster oy' ay tahay qayb caadi ah. Waxaad ka heli kartaa suuq kasta oo kasta oo ku takhasusay cuntooyinka Aasiyada ah iyo dhalada waxay socon doontaa waqti aad u dheer.
Cunto Hilibka Sucuudiga ee Oyster ayaa ah hordhac cajiib ah oo ku wajahan qaybahan muhiimka ah. Waa calyad dhakhso leh oo barafka digaaga iyo khudradda asaasiga ah ku jirta digsi qabow. Kuwaas waxaa lagu duuduubay suugo lafdhabarka lafil iyo suugo subag, khamri, maraq iyo wax kasta oo la siiyo bariis. Waxay qaadataa qiyaastii 30 daqiiqo iyo hal digsi, sidaas darteed waxay ku fiican tahay habeen weyn.
Mashiinka Gravy-Laden Steak
King Lee / EyeEm / Getty Images
Digaaggu wuxuu u muuqdaa dhowr nooc oo Shiineeys ah oo hilib shiidan leh ayaa badali kara. Wixii macmacaanka hilibka ah ee go'ay oo ah mid aad u fudud, fiiri wax dheeraad ah Miro Bariiska .
Cuntadan, waxaad isku dari kartaa hilibka ilaa 30 daqiiqo maraq soy ah ka hor inta aadan ku darin basbaaska iyo yaanyada. Ku dar waxyaabo yar yar oo dhagax ah, toon ah, iyo cunnooyin hadhuudh ah, isla markaana u diyaarso sidan oo kale. Waa wax cajiib ah oo cajiib ah, laakiin qofna ma ogaan doono sida dadaal yar oo aad u gelisay.
05 ee 11
Sigaarka Caanaha ah ee Dheecaanka ah
Isku-walaaq waa farsamo asaasi ah oo loo isticmaalo cuntooyin badan oo Shiine ah. Waa arrin aad u fudud oo, dhab ahaantii, waxay macnaheedu tahay in aad si dhakhso ah cuntada ugu shubeyso saliida. Waxaa jira, dabcan, talooyin yar yar oo foorno ah oo aad ogaan kartid, laakiin waxay si dhakhso ah u noqon doontaa dareen caadi ah.
Ka hor intaanad ka walwalin wax ka qabashada khudradda hilibka lo'da leh oo leh maaddooyin badan , waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku dhaqdo qashinka sahlan. Haddii aad ka bilowdo suugo isku-dabajoog ah sida Kikkoman iyo isku-darka khudradda la qaboojiyey, badhka shaqada ayaa lagaa sameeyaa. Waxay kaa xoreysaa inaad xoogga saarto farsamada halkii aad ka heli lahayd maaddooyinka. Waa sida dhadhan fiican oo kaliya wax yar dhakhso ah.
06 ee 11
Beerka la cuno delicious Orange Chicken Stir-Fry
Waxaad ka beddeli kartaa hilibka maqaarka ah ee ku dhowaad kiniin isku walaaq leh oo Shiine ah, waana shaqeyn doontaa. Haddii aadan digaag u lahayn cuntooyinka sida Orange Chicken Stir-Fry , waxaad xor u tahay inaad isticmaasho hilibka lo'da, hilibka doofaarka, gawaarida, ama xitaa tofu.
Marka ay timaado hilibka doofaarka, shimbiraha waa gooyo weyn in la isticmaalo. Waxaa si sahlan loo gooyaa xabadaha qaniinyada badan oo ay ku dhadhanayaan qandhada jilaalka. Wixii macaanka karootiga walaaq, waxaad marinade hilibka doofaarka iyo sameysaan Suugo soy ah iyo liin macaan. Ku dar dhawr khudaar iyo saliida yar iyo istaarijka, waxaadna diyaar u tahay in aad karisid saxan walaaq leh.
Kalluunka Kung Pao ee ugu Fiican
MasonRobinson / Getty Images
Waxaa laga yaabaa inaad ku amartay Kung Pao Qadarka wakhtiyo badan oo ka timi makhaayadda qaadka ee Shiinaha, waana saxan dhadhan leh oo leh laad cajiinka ah. Ma ogtahay in ay run ahaantii sahlan tahay in guriga lagu sameeyo?
Haddii aad soo iibsato jikadaada wax yar oo ka mid ah cuntooyinka aasaasiga ah ee laga helo cuntooyin badan oo Shiineeys ah, waxaad ku keydin doontaa lacag adiga oo iska ilaalinaya inaad qaadato. Furaha cuntada degdegga ah waa inaad u diyaariso dhammaan walxahaaga ka hor intaanad ku dhicin wok.
Faa'iidada kale ee ku jira qaasatan Kung Pao waa in digaaggu aanu qoto dheereyn. Waa meeshii la kariyey oo la shiilay, taasina waxay ka dhigeysaa saxan yar oo caafimaad leh.
08 ee 11
Nooc Kobcin Bilaaban: Kantaroolka Hilibka Kiliinka ee Kantan
Simon Chan / EyeEm / Getty Images
Bukaanku waa hab kale oo caan ah oo loogu talagalay diyaarinta cuntada Shiinaha oo wuxuu abuuraa saxan caafimaad oo nadiif ah. Tani waa halka ay ku yaalaan wareegayaasha bamboo wareega dhabta ah. Haddii aadan haysan mid weli, cuntadani waa cudurdaar wanaagsan oo aad ku dari kareyso jikadaada.
Cuntadani macaan ee Keanese Steamed waxay u muuqataa mid sahlan. Waxaad si fudud u daaqi doontaa digaag isku darka ah ee soya, khamriga, iyo saliida saliidda, ka dibna ku dheji taargada faasaska leh boqoshaada. Ku dar gambale yaryar iyo basal cagaaran oo u daa ilaa 20 daqiiqo. Waa wax cajiib ah tan bariiska la dubay oo aad baratay sida loo sameeyo!
09 ka mid ah 11
Sidee Ku Xadaa Khudaarta Cagaaran?
Waa mid aad u fudud in lagu beddelo suxuunta Shiineeska ah ee ku jimicsiga hilibka. Inta badan, waxaad si fudud u boodi kartaa hilibka, ku dar khudrado badan, ama xitaa rooga qaar ka mid ah tofu (walaaq-kareemka mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo diyaariyo).
Markaad diyaar u tahay inaad tijaabiso suufka soodhaha leh adigoo isticmaalaya aqoonta cusub ee walxaha kiciya, khudradda Chow Mein waa farxad. Waxay isticmaashaa basbaas alwaax, basbaas, zucchini, boqoshaada shiitake, sinjiga, iyo toon leh maraqa lafdhabarta iyo suugada soya, khudradda bariiska, iyo saliidda sisinta. Waxay si dhakhso ah u duudduubtay, dhadhankuna waxay ku farxi doontaa qof walba.
Hel dhadhamin Sigaar Caano ah
Ho xiiso waa baasto bariis ah oo badan oo la isticmaalo marar badan oo ku taalo Koofur Kuuriya iyo waxaad ka garan kartaa cuntooyinka qaadashada. Waxay ku dareysaa qoto dheer si ay saxan tahay in macaan oo macaan oo bariis ah oo aan soo qaadan karin.
Si aad u tijaabiso tijaabooyinkaaga noodhada, waxaad ku bilowdaa qodobbo aasaasi ah oo la yiraahdo Reef Cow . Midkani ma noqon karo mid sida runta ah sida kuwa kale, laakiin dhammaan dhadhanka ayaa jira oo waa nuxurka saxda ah ee saxanka, oo ay ku jiraan sprouts beetka.
Boorashka Dabiiciga ah ee Digaaggu
Sandy AKNINE / Sawirada Getty Images
Digaaga iyo hilibka lo'da ee Mongolian waxay la mid yihiin cuntooyinka kale ee leh farqiga ugu muhiimsan ee lagu daro suugada hoostin. Tan waxaa mararka qaar la yiraahdaa suugada shaaha laga sameeyo ee shinnida, inkastoo aysan dhadhamin sida versionka Maraykanka. Hoisin waa maraq la kariyey oo ah macmacaanka dufanka , waana wax aad u fiican oo aad u karisid kiniinigaaga shiineyska ah, sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa boodboodka iyo waliba dabeysha.
Cuntadani waxay ka mid tahay walxaha digaaga ah ee khudradda dufanka leh ee khudradda ka samaysan, khudradda cagaaran, khudradda cagaaran, khudaarta cagaaran. Waa wax fudud sida qandhada kale, kaliya wax yar oo kala duwan oo xiiso leh si ay u sameeyaan una cunaan. Waxaad arki doontaa in ay aad u fiican tahay marka lagu daro baakado la shiilay.
Ugu sareeya 12 Dukaamada Shiineeyska ee Shiinaha
Sidee loo jarjaraa khudradda xajmiga
Talooyinka Aasaasiga ah ee Cunnada Shiineeyska
Baro sida loo qalajiyo Fry Tofu
Sida loo daadiyo Sichuan Peppercorns
Sidee loo sheegaa haddii Wok aad tahay Hot Hot
Asalka Hore ee Finger Sawirka Taariikhda Shiineed ee Shiinaha
Cucumber Wasabi Martini Recipe
Sida loo sameeyo Aqoonsiga Bruschetta
Dufanka Cagaarka ah ee Caleenta leh Shukulaatada Shinjirta ah
Maalinta Mexican ee Dhimashada Dhimashada
Cuntada Latin America
Shaaha iyo Noocyada iyo Isticmaalka
Saladh iyo Baastada Salad
Samee Tortillas Corn Shelf
Hiyashi Yamakake Udon (Chilled Udon oo la Cuntay Dhulka Xeebaha ah ee Japan)
Qorsheynta iyo Adeegyada Shiineeyska Shiinaha
Sooska iyo Kaydka xilliga qaboobaha
Naaska Dhiigga iyo Tequila Digaagga
Ugu sareeya 17 Cunnooyinka Isticmaalka Cagaaran Andouille
Lemon Pound Recipe Cake - Sandkuchen leh Glaze